နီးလာတဲ့..တစ်နှစ်း) ~ သမီးစံ
ဟုတ်ကဲ့...အားလုံးပဲ..အားမနာတမ်း (အ၀) သုံးဆောင်ကြပါရှင်း)(သာမီးစံ..ဘာလို့..ဒီလောက်ရက်ရောနေ ပါလိမ့်နော် ?..) :P
ဒီနေ့ (၅-၁၁-၂၀၁၁)ရက်နေ့က..သမီးစံရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်း)
မွေးနေ့မှာ..အရင်နှစ်တွေကနဲ့မတူတဲ့..ထူးခြားချက်ကတော့.. သမီးစံမှာ..ဘလော့အိမ်လေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ပြီး..ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဘလော့ဂါများနဲ့..ကျင်းပခွင့်ရတာလေးပါပဲ။ဒီ့အတွက်လည်း..အတိုင်းမသိ.. ၀မ်းသာမိပါတယ်ရှင်...း)။မွေးနေ့ရောက်တော့..အရင်နှစ်တွေကလို..အိမ်မှာပဲ..ဘုရားရှိခိုး၊ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ဖြစ်ပါတယ်။(အဖေ)နဲ့..အမေ့ကို..ရှိခိုးပါတယ်။နောက်တော့..သူငယ်ချင်းကို..လိုက်ပို့ပါတယ်.. (ဘိုးဘွားရိပ်သား) ကိုယ့်တွက်...လက်ဆောင်တဲ့း)
သြော်........ဘာလိုလိုနဲ့...အသက်တစ်နှစ်..ကြီးသွားပြန်ပါပေါ့လားနော်း))အသက်သာ..တစ်နှစ်ကြီးသွားပါတယ်..သမီးစံတစ်ယောက်..ငယ်ငယ်တုန်းက..လိုပဲ..ဂျစ်ကန်ကန်..ပေစုတ်စုတ်နဲ့.နေ.နေတုန်းပါ ..ကြီးလေ..ချဉ်လေ..သံပယိုသီးရာထူးကို..ပိုင်ဆိုင်ထားတုန်းပါ..မိဘလုပ်စာ..ခုချိန်ထိ..ထိုင်စားနေတုန်းပါ ..ပြန်မပြော..နားမထောင်နဲ့..လုပ်ချင်ရာကို..လုပ်နေတုန်းပါပဲရှင်.. ( ရာထူးတွေက..နည်းနည်းနောနောပဲနော်း) ပြီးတော့..ခုချိန်ထိ...အပျိုကြီး..အဲလေ..( ယောင်လို့).ဘာမှ..မှုတ်တော့ပါဝူး... နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့...ပြောချင်တာလေးကတော့....
.ခြစ်ခြုပ်ပြီးစုထားတဲ့..ပိုက်ပိုက်လေးတွေကို ( ရွှေမိုးမတတ်နိုင်လေတော့) ငွေမိုးအဖြစ်..ရွာပေးပါရစေရှင် :D
အစိမ်းတွေချည်းပဲနော်.. ဟဲဟဲ :)
ယနေ့ မှစ၍ချစ်တဲ့သူတွေ့ ပေါပါစေလို့ အပျိုကြီးအတွက် မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ် ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ဆုနဲ့ငါလည်းပြည့်ပါစေ
မွေးနေ့ မှစ၍ နှောင်နှစ်ပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်ခြင်းများနဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနိင်ပါစေ..မိမိကိုယ်တန်ဖိုးထား လေးစာမြတ်နိုးတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ တွေ့ ပါစေ..:p
မွေးနေ.မှာပျော်ရွှင်ပါစေ..ချစ်သူငယ်ချင်းးလေးးယေ....နိုဝင်ဘာ(၅)ရက်မွေးနေ.မှစလို.အော်တန်.ညီမလေးး...ဆန္ဒနဲ.ဘဝတထပ်ထဲကျပါစေ..... ချစ်တဲ.ဘလော.မှသူငယ်ချင်း မေသန်.ဇင်
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်အ၀စားသွားတယ်နော် စိတ်ကူနဲ့:)
အပျိုကြီးရေ ... အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားပြီနော် ....အဟီး ... အများကြီးမတွေး မနေနဲ့ တော့လေ ...ကယ် ... ယနေ့ မှ စလို့နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိသာယာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝ တစ်ခု အမြဲတမ်း ပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ....ခင်မင်စွာဖြင့်မောင်ဘုန်း
စံစံရေကြိုတင်လဲဘာမှမပြောပါလားတစ်ခုခုတော့လုပ်ပေးချင်တာပေါ့စားချင်စရာလေးတွေ အပြတ်ဝါးခဲ့တယ်နော်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့အတူမိသားစုတွေ စုစုစည်းစည်းနဲ့ ပျော်ရွှင်သာယာသောဘ၀လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေ။ချစ်နေတဲ့ မဂျက်
၂၅နှစ်ဆိုတော့ အပျိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးသူများတိုင်းပြည်တွေမှာ ၄၀ကျော်မှ အပျိုကြီးလို့သတ်မှတ်တာ(ဘာ ဘယ်တိုင်းပြည်လဲ မမေးနဲ့နော် ဟီး မသိဘူး)ဒီတော့ သမီးစံလဲ ၄၀ကျော်မှ အပျိုကြီးလို့ ခေါ်တာခံခေါ်တဲ့သူရှိရင် အကိုတော်ကို တိုင်ပြောနော် စတာပါ၂၅နှစ်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်မှု့တွေနဲ့ ပြည့်စုံပါစေလို့အကိုတော်နဲ့ ယောင်းယောင်း မဒမ်လွင်ပြင်က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကွယ်
အန်ကယ်မောင်..အန်ကယ်သျှင်နေမင်းမမအော်တန်..မမလမင်းဘဘမောင်ဘုန်း..မမဂျက်စမင်ဘိုးလေးလွင်ပြင်နဲ့.ဘွားလေး.မဒမ်လွင်ပြင်(နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်တောင်ဆိုတော့..မများလွန်းဘူးလားနော်း)တီတီမြတ်ကြည်....းDမွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံး..ပေးတဲ့ဆုနဲ့..(အများကြီး)ပြည့်ပါစေရှင်မီးမီးအသက်က..ခုမှ.ဆယ့်ခြောက်နှစ်ရယ်ပါးPချစ်ခင်လေးစားလျှက်သမီးစံ
သမီးစံ ရေ ...ဆောရီးပါ အရမ်းနောက်ကျမှ ရောက်လာတယ်..ကားတွေကြပ်လို့ပါကွယ်..း)ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ပါကွယ်..အိမ်မက်စေရာ
အင်း စိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့ ရောက်ချလာတာ ပဲဗျာဒီရောက်မှ တွေ့ဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါစေဗျာ
မွေးနေ့ လာစားတာအဲလေ လာဆုတောင်းပေးတာပါ.. နောက်ကျသွားလို့စားစရာတွေ ကုန်ပြီထင်ပါရဲ့... ပျော်စရာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ.. ဒီနေ့ဒီရက်ကစ နေ့ရက်တိုင်း ပျော်ရွှင်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒတွေအားလုံး ပြည့်စုံပါစေမိဘကျေးဇူကို အထူးသိတတ်ပေးဆပ်နိုင်သော ချစ်စရာသမီးကောင်းလေး ဖြစ်ပါစေ... ဆုတောင်းပေးပြီးပြီမို့ သမီးစံပေးထားတဲ့ ပိုက်ပိုက်တွေထဲက ၂၀တန်တစ်ရွက် ကားခ ယူသွားမယ်နော်.. ၂၀တန်ကား ရှိရောရှိသေးရဲ့လား မသိ.. :)
ကောင်မလေးဓာတ်ပုံရိုက်တာ ပဲအပေးလွန်ပြီး ရေထဲလည်း ပြုတ်ကျနေဦးမယ် သတိထားဦး..း)
စားချင်စရာပဲဗျို့။ Happy Birthayပါ။ ငွေမိုးများဖြန့်ကျဲတဲ့အတွက် သာဓုပါခင်ဗျာ။ ယောက်ျားချောချောရပါစေ။ အဲလေ လိုတရပါစေဗျာ။
အော်... ဘာလိုလိုနဲ့ သမီးစံတောင် အသက်တစ်နှစ်ကြီးလို့ အပျိုကြီး ဘဝထဲ ကူးပြောင်းတော့မှာနော်.. :P ဂိုက်ပေးတော့ အတော်ကျန်းတဲ့သမီးပဲနော်. :P သမီးစံ ကျွေးထားတဲ့မုန့်တွေက ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် တကယ်လဲ စားရဘူး... ။ အပြင်မှာပဲ တကယ်စားချင်တာ အဲဒီမုန့်တွေကို။ :)ထာဝရပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ပေါင်းမြောက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် သမီးရေ.... ခင်မင်စွာဖြင့်...ဦးဇော်
မွေးနေ့ မှသည် ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေ...
သမံစီးလေးရေ မွေးနေ့ရက်မြတ်မင်္ဂလာနေ့လေးကစလို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် လိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်ပါစေကွယ်။စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြ ချမ်းသာသုခနဲ့ပြည့်ပါစေလို့ ထပ်လောင်းဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်နော်။မေတ္တာဖြင့်အန်တီတင့်
သမီးစံ လေး မမ ကမွေးနေ့ ကိုနောက်ကျပြီးမှ ရောက်တော့ မစားရတော့ဘူးပေါ့။မမ နဲ့ ဘလော့ဂါတို့ ရဲ့ ချစ်သမီးစံလေး မွေးနေ့ မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျန်ကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်း သာ သာ နဲ့ ချစ်သော သူများနှင့်အတူ ဘ၀ ကို အေးချမ်းသာယာစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ။ ကောင်းသော လိုရာဆန္ဒများ နဲ့ ပြည့်စုံပါစေ လို့ မမ ကဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် ။ချစ်တဲ့ မမ။
Happy Birthday!!!! ဘဝနဲ့ဆန္ဒ တစ်ထပ်ထဲကျပါစေလို့ ကျွန်တော် ကဆုမွန် ခြွေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.... နောက်ကျသွားသဗျာ။ စိတ်မကောင်းဘူး ပိုစားမယ်။ မျက်စိနဲ့စားရတာအားမရဘူး။ အပြင်မှာလိုက်ကျွေးရမယ် ဒါဗြဲ... :p
ပျော်ရ်ွဖွယ်မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါစေ သမီးစံ..:)နောက်ကျဆုတောင်းလေးအတွက် ခွင့်လွတ်ပါလို့...
Happy Belated Birthday ပါ ညီမစံရေ...။ နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါနော်။ မွေးနေ့မှာရော၊ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ပါစေ၊ အိပ်မက်တွေလည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေ (အပျိုကြီးဖြစ်ခြင်းကို ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ပါ၊ စာရေး ၀ါသနာ ပါတဲ့ ညီမစံ စာရေးဆရာမကြီး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတာပါ ခစ်ခစ်း) ဒါနဲ့ စကားမစပ်လေ မရို့စ် ရေးထားတဲ့ "ကာရန်ပျို ၀တ္ထုတိုလေးကို ဘလော့ဂ်ဂါ မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြဖို့ ရွေးလိုက်ပြီလို့" ညီမ လာရေးသွားတာ နောက်နေတာလားဟင်။ သိပ်မရှင်းဘူး ဖြစ်နေတယ်။ မေးမယ် မေးမယ်နဲ့ ညီမကို မမေးဖြစ်ဘူး...။ ညီမ ဘာပြောချင်တာလဲ မသိဘူးနော်။
Happy Birthday Sister:)
နှမတော်က အကိုတော်ကိုမပြောပါလား အလာနောက်ကျတော့ မမ ဂျက်တို့ ဆာမောင်တို့ ၀ါးးးးထားတာ ပန်းကန်ပဲဆေးလိုက်ရတယ် ဟွန့် အိုက်တိုးပကေးစံပေး
မျက်နှာလိုက်တယ်ဗျာ.. ဘလော့ဂါတွေဧည့်ခံတာ အများကြီးပဲ။ ဘုန်းဘုန်းတွေကျတော့ ဘာမှမကပ်ဘူး။ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသော၊ ယဉ်ကျေးလိမ်မာသော၊ လူကြီးမိဘ ဆရာသမားကို ရိုသေလေးစားသော၊ ပွင့်လင်းရိုးသားသော သမီးအလိမ်မာလေးတစ်ယောက် မွေးနေ့မှသည် ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက် သွားတိုင်းရောက် ထိုးတိုင်းပေါက်(ထီ/ချဲ) ၀တ်တိုင်းယဉ် ဆင်တိုင်းလှပြီး တွေ့သူတိုင်းက ချစ်ခင်နိုင်ပါစေကွယ်.. ပါစေကွယ်.ချမ်းမြေ့ပါစေချယ်ရီမြေ
မွေးနေ့က ဧည့်ခံထားတွေများလှချည်လား။ ဘုန်းဘုန်းတွေကျတော့ ဘာမှမကပ်ဘူးပေါ့။ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသော၊ လူကြီးမိဘ ဆရာသမားစကားနားထောင်သော၊ လိမ္မာယဉ်ကျေးသော၊ ပွင့်လင်းဖော်ရွေသော မွေးနေ့ရှင်သမီးအလိမ္မာလေး မွေးနေ့မှသည် ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်၊ သွားတိုင်းရောက် ထိုးတိုင်းပေါက် (ထီ/ချဲ) ၀တ်တိုင်းယဉ် ဆင်တိုင်းလှပြီး တွေ့သူတိုင်းကလဲ ချစ်ခင်နိုင်ပါစေ...။ .... ပါစေဟု..ချမ်းမြေ့ပါစေချယ်ရီမြေ
happy birthday ပါ ညီမရေ...နောက်ကျမှ မွေးနေ့ ဆုတောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ညီမရေ...
မွေးနေ့ကိုး။ သိတောင် မသ်ိလိုက်ဘူး။ဒါနဲ့ ဓါတ်ပုံက ဘယ်မင်းသမီး ဓါတ်ပုံ ကူးပြီးတင်ထားလဲ မသိ။း))နောက်မွေးနေ့တွေမှာလဲ ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ များများ ကျွေးနိုင်ပါစေ။အပျိုကြီးဘ၀မှလဲ ကျွတ်လွတ်နိုင်ပါစေ။း)ခင်မင်လျှက်